Nguwuphi na ukhetha, isithuthuthu zombane okanye Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Iivenkile ezininzi intanethi baye baqalisa ukuhambisa ngezithuthuthu self balancing kunye hoverboards once more. Isithuthuthu Cwaka kuzisa ngokufanelekileyo ngexabiso, umgangatho prime avenue-zomthetho, i Koowheel green electric scooters export to Europe. The hand or feet-operated brake permits you to stop the scooter instantly without shedding the balance. With this functionality you’ll be able to leave your stability scooter out of sight and never fear that somebody will ride it away as it won’t work until you press the button once more. These are constructed to the very top standards these private transporters will be built to, and it doesn’t have any of the security concerns that a number of the lesser brands have. The scooters are also made in the identical principle when the microprocessors as a substitute of the mind ship the sign to the motor.
Scooters zombane enamavili kwa ikhuseleke ngaphezu Bikes ukusukela ukuba yenziwe ngezinto zeplastiki unzima kwaye kufuneka siza ukwenza iintshukumo ezininzi emzimbeni ezinokuba nobungozi enokwenzeka. Emva kokuba sibe sigqityiwe tutorial rider ngoko ndokholiswa kuzo zonke iinkalo app. Yintoni iinketho scooter best ezintathu ulutsha? Ngenxa ekudaleni asekhona unoxanduva ngakumbi ucinezelo iingozi kunokubangela kwimiba intlala atyiwe ixesha elide, oogqirha babantwana lubonisa ephantsi kwempembelelo umthambo, ingakumbi ulutsha abatyebe kabani amalungu sele usengozini. Ngubani ofuna ukuhamba xa uza kukwazi ukundiza, efanelekileyo? Hoverboards anokwahluka phakathi ezahlukeneyo yamavili. Abaninzi ezithunyelwa ngqo kwi China ngokunjalo kuya kuthabatha iintsuku 7-12 ukufika ngaphakathi US. Ukuba ufuna nkqi ngakumbi, uyakwazi ukufumana i hoverboard kwindawo yokugcina yethu aphesheya. Nangona ulutsha ezininzi kunye abadala zisetyenziswa ukuya ekhwele iibhayisikile ube iziqhoboshi ivili ngaphambili, ngasemva-ivili elekhtrons sikhulu ekhuselekileyo kwaye lunciphisa ubungozi lowo encinane ephoswa phambili kanti sigcine ngoko nangoko. Yenzelwe kwayo amavili ezinkulu yangaphakathi omnye ulawulo ingcono sithambe phantse nakuwuphi na umgangatho, nkqu lolwandle! Kukho isebe yolawulo encinane ekude olwenza ukuba ubenemboniselo Rubber Electric.
Siye ncakasana abasebenzi yoyilo kakhulu abaqeqeshiweyo nabanamava kwicandelo, kwaye nokuba abanobuchwephese lomenzi engenamkhethe ezibalulekileyo, izixhobo lokukhangela phambili kunye isiseko sokuvelisa eqinisekisa iimveliso ekunene. Zininzi abadumileyo usebenzisa lo izixhobo self-balancing nale divayisi wakhula waba imiba ngeholide bebecelwa arcade nokukhuthaza nokuthenga kulo nyaka (2018). I E1 kakhulu leyo kakhulu wayedume ngabantu abaninzi abatsha. Nje zinyathela, uya kuba bayakwazi uhambo oko ngemizuzu, yonke imihla ekhwele ukufunda yimizuzu 3-5 kuphela. Ukuba bekhwele udiniwe, oko isongwe. Ngoko zilula kakhulu.
Enye wireless Rubber ekude zombane kunye namavili replaceable DB uyilo Eyahlukileyo kuya kunceda Motors okupholisa maximumly Max Speed 42km / h, kunye ehlabathini lonke ekhokelayo, ugwayimbo kunye nemisebenzi ngokungqinelana ucinga abantu. Abasebenzi emva eli Rubber ithi "i Rubber lokugqibela zombane ," kwaye malunga ukubona isizathu. I KOOWHEL Electric Rubber ngoku iza Iimoto ezimbini! Rubber zombane esikuyo ngakumbi lula, kwacaca kakhulu ngethuba leeyure rush. Unakho ukuthenga ibhetri. ukuba oko, nina musani ukuyixhalela bephelelwa ibhetri emva kokuba uyisebenzise.